बाँकेमा लकडाउन किन नगर्ने ?
रामु ओली : शुक्रबार बाँकेमा करिब दुई सय जनामा कोरोना पुष्टि भयो । नेपालगन्ज मेडिकल कलेज नेपालगन्जमा त ४५ जनाको स्वाब परिक्षण गरिएकोमा ४५ जनामै कोरोना पुष्टि भयो ।
उता भेरी अस्पताल नेपालगन्जको परिक्षणमा १२७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने बागेश्वरी ल्याबमा गरिएको परिक्षणमा सहित १९९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बाँकेमा सरदर ६५ प्रतिशत कोरोना संक्रमणको रेसियो देखा परेको छ । १०० जनाको कोरोना परिक्षण गर्दा ६५ जनामा कोरोना पुष्टि भैरहेको छ ।
कोरोना संक्रमण पुष्टि मात्रै होईन, यता कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको सिलसिला समेत रोकिएको छैन । भेरी अस्पतालले बेड छमता नभएको जानकारी दिइसकेको छ । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले अहिलेको स्थितिलाई नै मध्यनजर गर्दै कोभिड वाड संचालन गर्नु पर्यो भने कोरोनाको पहिलो लहरमा संचालनमा आएको ह्वाइट हाउसको आइसोलेसन समेत सुचारु गर्नु परेको छ ।
बाँकेमा दैनिक कोरोना संक्रमणको दर बढ्ने र मृत्युु हुनेको सिलसिला समेत नरोकिएको अवस्थामा स्थानिय प्रशासनले नेपालगन्ज वा बाँकेको भिडभाड हुने स्थान पहिचान गरि किन लकडाउन नगर्ने ? यो प्रश्न अहिले बाँकेबासीले उठाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
उच्च अदालत बार एसाेसियशन नेपालगन्जका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता पदम पाण्डेयले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेख्दै नेपालगन्जमा लकडाउन गर्नु पर्ने जिकिर गरेका छन् ।
लकडाउन मात्रै होइन पाण्डेयले नाम मात्रको लकडाउन नभै कामको लकडाउन गर्नु पर्ने जिकिर गरेका छन् ।पाण्डेयले अगाडि लेखेका छन् , ‘काेभिड-१९ दाेस्राे लहर राेकथामका लागि कम्तिमा २ हप्ता नाम मात्रकाे नगरी “काम “काे लकडाउन अनिवार्य छ ।’
यसरी नेपालगन्ज मात्रै होईन पूरा बाँके नै कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेको बेला स्थानीय सरकारले कडा खालको लकडाउन गर्नु पर्ने स्थानिय तथा अगुवाहरु बताउने गर्छन् ।
त्यस्तै बाँकेका पत्रकार खगेन्द्र दाहालले लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान नहुने भन्दै लकडाउन गरे पनि त्यसको पालना जनताले गर्नु पर्ने हुन्छ । नाम मात्रको लकडाउनले जनताले दुख पाउने मात्रै हुन सक्छ त्यसैले कोरोना नियन्त्रण गर्न भिडभाड नियन्त्रण गर्नको लागी कडा खाले लकडाउन गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् ।
त्यस्तै बाँके खजुराका ब्यवसायी प्रेम बुढाथोकीले समेत अहिलेको बिकराल परिस्थितिमा लकडाउन गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् । उनले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा राख्दै लेखेका छन् , – “बाँकेमा पहिला १ जनामा कोरोना देखिँदा लक डाउन हुन्थ्यो अहिले सयौं जनामा पोजेटिभ देखिएको छ ,लकडाउन गरौन सरकार
पछी झन् गाह्रो हुन्छ कि ।”
लकडाउन गर्नु लर्छ भन्नेमा अग्रपंक्तिमा रहने बाकेका पत्रकार तथा इसेतोखरी डटकमका कार्यकारी सम्पादक कमल न्यौपानेले अहिलेको परिस्थितिमा लकडाउनको विकल्प नरहेको भन्दै लगातार रुपमा स्थानिय प्रशासनलाई दबाब दिदै आइरहेका छन् । न्यौपाने बताउछन् , कोरोना जसले भोगेको छ उसले मात्रै त्यसको भयावह स्थिति थाहा पाउछ , त्यसैले मलाई केही भएको छैन भन्दैमा हेलचेक्राई गर्न नहुने र सायमै संक्रमणबाट जोगिन लकडाउन गर्नु पर्छ ।
यता बाँकेमा दिनप्रतिदिन अस्वभाविक रुपले कोरोनाको ग्राफ उकालो लागिरहेको बेला नेपालगन्ज बजार भने अव्यवस्थित रुपले स्वास्थ्यको मापदण्ड बिनै भिडभाड रहेको छ ।
यता बाँके प्रहरीले आज देखि केही समयलाई भए पनि चोकचोकमा मास्क चेकिङ गरेको थियो । जसको कारण स्थानियमा केही हद सम्म भए पनि मास्कको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ ।
स्थानिय सरकार ,गृह प्रशासन र बाँकेबासी मिलेर नै सजग भएर कोरोना संग लड्नु पर्ने स्थितिमा केहिका ब्यवसाय, केहिका निहित स्वार्थका लागि गरिने जमघट, गरिने कार्यक्रम र भिडभाडले कयौको लाखौ रुपैयाँ उपचारमा नोक्सान हुन सक्छ , कतिलाई शारीरिक र मानसिक तनाव निम्त्याउन सक्छ , कतिले ज्यान त कतिले परिवार गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ ।
त्यसैमा नेपालगन्ज भारतिय सिमाना संग संग जोडिएको शहर भएका कारण पनि जहिल्यै उच्च जोखिममा रहने गरेको छ । त्यस्तैमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुमा दैनिक रुपमा कोरोना पोजेटिभ देखा पर्दै आएको छ । शनिबार मात्रै भारतबाट नेपालगन्ज नाका भएर आउने १० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।यस्तो अवस्थामा नाकालाई कडाई र लकडाउन नगरे के गर्ने ? र अहिले नै सजग नभए कहिले हुने ?